Teknụzụ geospatial, ọrụ ya na mkpa ya na ntọala IT na Ngalaba ationgbọ njem. - Geofumadas
Septemba, 2017 Geospatial - GIS, GPS / Equipment, innovations
Igwe ihe omimi nke Geospatial. Enwere dị ka niile Teknụzụ eji nweta, jikwaa, nyochaa, na-ahụ ma na-ekesa ma data ahụ ma ozi a na-ezo aka na ebe nke ihe ihe, na-akụziri ya mbụ tụụrụ ime nke chi atọ n'ime esịnede nnoo nke GIS, GPS na Remote N'ịchọpụta (RS English) incorporating ndị abụrụ teknụzụ na-eji a ala akụrụngwa (eg, geofencing) na onodu nke, n'etiti ihe ndi ozo, "teknụzụ na-ejikọta na njedebe ha esiwanyewanye"
N'ezie, mgbe echiche ndị e mere na mbụ banyere mmalite nke GIS, okwu ndị metụtara ya na ndị ọkachamara chọrọ na mpaghara a; O yiri ka o doro anya na anyị kwesịrị ịkwaga ugbu a na "ọrụ omume" ma kwurịta ọnọdụ akwara nke e ji eme ihe ndị ahụ.
Mgbe ahụ, m lọghachiri site na Bruce Aquila iji gụọ isiokwu ahụ nke ga-amalite taa. Ana m ewepụta atọ (3) na m nwere ike ịmalite:
Evolution. WebGIS (GIS nke na - eji teknụzụ Weebụ) akọwapụtara dị ka mgbanwe nke GIS nke components nke usoro (Akụrụngwa, Software, data na ndị ọrụ) agaghịzi achọ ihe niile anụ ahụ n'otu ebe ahụ kama, site na ọganihu ọhụrụ a, ihe ọmụma enyere onye ọrụ ahụ nwere ike ịnweta nanị, ngwa ngwa ma n'ụzọ akụ na ụba na-eji usoro ihe omume na ụkpụrụ kwesịrị ekwesị na-enye ohere njikọ na mgbanwe nke components. Ụzọ a nke "ijere" ozi ahụ bụ ihe na-enye ohere maka WebGIS na-ewuli elu na Intanet ma mara ya Ọrụ Weebụ
Na-echefu na WebGIS nwere ike imejuputa atumatu di iche iche: na igwe ojii, na mpaghara ma ọ bụ dị ka njikọta nke abụọ dabere na ikpe ahụ, nke dị mkpa ugbu a maka ọrụ anyị.
Nchekwa. N'ime ụlọ ọrụ ndị dịka Ngalaba Ụgbọ njem nke ụlọ ọrụ ọ bụla, ebe ebe bụ isi ihe dị mkpa nke ọrụ, ọ bụ dị oké mkpa emepụta ihe ga-eme ka mkpebi zuru oke na ọrụ na ọrụ metụtara arụmọrụ, ụzọ okporo ụzọ, nchekwa, injinịa na nchekwa, n'etiti mpaghara ndị ọzọ.
Anyị na-achọpụta na teknụzụ geospatial ejiri mee ihe dị mkpa na usoro a. Mana, ma nyekwa na ma okike nke Ọrụ Weebụ na ntinye nke WebGIS n'ụdị ya ọ bụla na-ezo aka na ojiji nke IT ("Techies" n'etiti), ọ dị mma ịjụ onwe anyị na ngalaba nke ngalaba (DOT na Bekee) teknụzụ nke ụwa ọ ga-adabara nke ọma iji nyere aka na mkpebi mkpebi a na usoro dị mma?
Akwịla, ya ederede Ajụjụ a na-ebilite n'ihi na, dịka anyị ga-amata mgbe e mesịrị, ọ na-atụ aro n'ezie gbanwee ma jiri ihe kpatara ya.
"Kemgbe ụwa a technology dina na atụmatụ nkewa" asụchikwa na kwukwara, sị na nke a bụ n'ihi na, n'etiti ihe ndị ọzọ, ya ọrụ dị ka ihe gbasara nyocha ngwá ọrụ na-eme mkpebi na ya bụ isi ọrụ na-ezute ndị multiple mkpa maka nkewa .
Otú ọ dị, na-aga n'ihu Aquila, ohere technology evolves, a malitere iwekota ukwuu na DBMS. Ya mere, DBMS dị ka Oracle, SQL Server, DB2, na PostgreSQL na-akwado ụlọ ahịa data nchekwa data, nke na-agbakwụnye mmetụta nke imejupụta echiche ihe gbasara mbara igwe n'ime ụlọ ọrụ IT nke DOT.
Ihe nke abụọ
"Ọzọkwa, DOT na-eji ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọrụ weebụ iji nweta uru nke data ahụ bara uru echekwara na ọdụ data" ka onye edemede ahụ gara n'ihu, na-arụ ụka mgbe e mesịrị na "na-eburu mwakpo cyber ọtụtụ oge taa, ngalaba IT kwesịrị inwe njide siri ike banyere ụdị dị iche iche na ojiji nke ọrụ ntanetị ndị emejuputara "nke ọ na-achọpụta na nke a ga-abụ ihe ọzọ ga-amasị" mwepụ "n'akụkụ nke IT nke DOT.
Mepee isi nke nyocha gị, enwere ike mgbanwe na desktọpụ desktọọpụ eji ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ doro anya na "ịdabere na nkà na ụzụ ọfịs desktọọpụ"; n'ihi mgbasawanye nke ọrụ weebụ nke na-ebelata mmefu ego, na-elekwasị anya n'iji ngwanrọ desktọọpụ maka "ọrụ nchịkọta arọ arọ".
Ihe nke atọ
Mmalite nke igwe ojii na-enwekwa mmetụta na mwebata na nhazi IT. Nke a bụ n'ihi na DOT na-amalite ịtụle iwu ụlọ na ígwé ojii. Icheta ebe a dị ka ihe bụ isi kpatara njikwa nke nchekwa nke, doro anya, na-eche banyere ngalaba IT. N'okwu a, ọ na-ekwu, a chọrọ nlezianya mbụ iji kpebie ebe ụlọ ihe a mepụtara: n'ime ma ọ bụ na-eji "ọrụ ọrụ igwe ojii n'ahịa". Ka anyị gbakwunye na isiokwu a abụwo ihe kpatara ya ngosi Aquila na ndị ọkachamara ndị ọzọ mere anyị na-atụ aro ịgụ maka ndị chọrọ ịbawanye na nke a.
Ihe Akwịla na-atụ aro karịsịa bụ "mwepụ" nke todo ihe na-eche banyere nkà na ụzụ geospatial na mpaghara IT nke DOT maka ihe kpatara ya.
Mara na ngbanwe a ga - eweta nguzogide na mgba iji zere ọnwụ njikwa site na isi ụlọ ọrụ ọdịnala; mgbanwe ahụ, ọ bụrụ na ọ pụta, ga-achọ oge nnabata site n'aka ndị "emetụtara". Ya mere, o kwubiri na "a ghaghị ime ihe niile maka ọdịmma nke nnukwu ọdịmma."
Anyị na-ejedebe okwu a, n'ụzọ doro anya, ịjụ ajụjụ ndị a:
Ànyị kwenyere na onye edemede ahụ?
Ànyị maara otú chaatị usoro nlekọta nke otu DOT dị n'ógbè anyị?
Kedu ihe anyị chere banyere ya?
Previous Post«Previous Ndụ - Ajọ Ifufe Irma - A na-ejikarị Society emekọrịta ihe na geospatial
Next Post Ànyị na-emikpu anyị n'ezie na usoro "ọhụụ" mgbe ọ bịara na 3D Spatial?Next »